I-China Isantya esineSantya esiPhezulu seZine zeNtloko Umatshini weVarnishing Machine (udidi olunemisebenzi emininzi) bokudaya, ubuchule, umzi mveliso weoyile kunye nabathengisi | Sunkia
Isantya esizenzekelayo ngokugcweleyo esineentloko ezine Umatshini weVarnishing UV (uhlobo olunemisebenzi emininzi) bokudaya, ubuchule, ukuThambisa i-Matte
Imodeli ekhawulezayo ezenzekelayo ngokupheleleyo ngenkqubo yohlengahlengiso lombala omnye, ngesantya esiphezulu seemitha ezingama-90 ngomzuzu, evumela ukonyuka okubonakalayo kumthamo wemveliso.
Imodeli ekhawulezayo ezenzekelayo ngokuzenzekelayo ngenkqubo yohlengahlengiso lombala omnye, ngesantya esiphezulu seemitha ezingama-90 ngomzuzu, ukuvumela ukwanda okukhulu kwimveliso.
Imodeli yeXJB ixhotyiswe ngenkqubo yemela yomoya kwinkqubo yokutyabeka i-UV ukuze umatshini abe lula kwi-UV epolish iphepha elincinci. (Enye inkqubo yommese womoya inokuthengwa kwisiseko Inkqubo yokutyabeka ioyile).
Inkqubo yokususa umgubo omabini inokuqinisekisa ukucoceka komphezulu wephepha ngaphambi kokucoca, ukuphucula umgangatho wevanishi.
Lamp Isibane se-UV sokuphilisa i-UV kunye nenkqubo yokomisa sineendlela ezimbini: izibane ezizeleyo kunye nezibane zokukhanya, ezinokwandisa ubomi benkonzo yesibane se-UV. Isiphatho sesibane se-UV sinokuhanjiswa sinyuswe sisiya phezulu ngoxinzelelo lwenkqubo yomoya ngexesha likaxakeka ukuqinisekisa ukhuseleko kunye nokunciphisa ilahleko.
Inkqubo Injengokubengezela UV isebenzisa umva ivili intsimbi ukulawula ukutyeba oyile, kuphephe ukukhama ivili yerabha
kwaye uqinisekise ngokufaka ioyile efanayo. Inkqubo yokutya iphepha ngokuzenzekelayo ngokuzenzekelayo kunye nenkqubo yokususa uthuli kabini (XJT / B-4). Umgubo ucofe kuqala, emva koko uthuli lungakhukuliseka ngamanzi acocekileyo ukuqinisekisa umgangatho wengubo.
Ithunyelwe inkqubo yokuphilisa i-UV. Inkqubo yokuphilisa i-UV inesibane esigcweleyo kunye nesiqingatha semowudi yesibane enokonyusa ukhuseleko kunye nokunciphisa ilahleko, kwaye inokwandisa ubomi besibane se-UV.
Inkqubo yokumisa ioyile esezantsi isebenzisa iityhubhu ze-quartz ezikumgangatho ophezulu ukomisa ngokukhawuleza. Ibhokisi yolawulo yamkela iindawo ezikumgangatho ophezulu zokungenisa umatshini ukuze usebenze ngokuzinzileyo nangokugudileyo.
IXJT-1200 / XJB-1200
Ubukhulu. Ubungakanani bePhepha (W * L)
I-1450 * 1450 (mm)
Min. Ubungakanani bePhepha (W * L)
I-350 * 350mm
Iziqwenga ezi-3 zesibane se-UV
Lobukhulu Machine (L * W * H)
Egqithileyo Isantya esiphezulu seVarnishing kunye noMatshini wokuCalendering
Okulandelayo: Isantya esiphakamileyo soMatshini oSebenzisa iVarnishing Machine (iMisebenzi emiBini, kuwo omabini iphepha elingqingqwa nelicekeceke)